Myanmar's Economic Growth to Drop to 0.5 Percent: World Bank | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar's Economic Growth to Drop to 0.5 Percent: World Bank
The COVID-19 pandemic has put an enormous pressure on the global economy; Myanmar’s economy is no exception from it. The World Bank, in its recently released Myanmar Economic Monitor, revised its forecast for the country in the 2019-2020 fiscal year to be as low as 0.5 percent as all sectors are hit, with adverse effects of varying intensity projected across all sectors. Nearly six months ago, on January 15 this year, it forecasted the economy to grow by 6.4 percent in the 2019-20 fiscal year, up from 6.3 percent last fiscal year.
“If the pandemic is protracted, the economy could contract by as much as 2.5 percent in FY2019/20, with the expected recovery in 2020/21 subject to further downside risks,” said the World bank.
The impacts of the crisis transmit through external and domestic channels and are not evenly distributed across sectors: tourism-related services and transportation activities are highly exposed to the pandemic, while the agriculture and information and communications technology (ICT) sectors have proven relatively resilient. Indeed, the ICT sector is experiencingasurge of activity driven byasudden increase in telecommuting and e-commerce.
Agriculture, which contributes 22 percent of the economy, has proved resilient with growth estimated to slow by less than in other sectors, to 0.7 percent, thanks to strong crop production offsetting weakening livestock and fisheries sector.
Under the baseline scenario, the GDP growth is rate expected to recover to 7.2 percent in the 2020-21 fiscal year; however, it will take time for the economy to recover to the size it would have been if COVID-19 had not struck.
“At the moment, the medium-term outlook for Myanmar’s economy is positive, but there are significant downside risks due to the unpredictable evolution of the pandemic. Robust policy actions are urgently needed. It is important for the government to boost the effectiveness of the CERP by ensuring flexibility in spending targets, extending support to smaller enterprises, and ensuring all poor households can benefit from the plan,” said Mariam Sherman, World Bank Country Director for Myanmar, Cambodia and Lao PDR.
The slowing economic growth threatens to partially reverse Myanmar’s recent progress in poverty reduction while reducing the incomes of households that are already poor.
COVID-19ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ်များစွာ ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာလည်း ထိုဂယက်မှ မလွတ်ခဲ့ပေ။ မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မြန်မာ့စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ခြောက်လခန့်က ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်ကတော့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ယခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၆ဒသမ၄ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်မှာ ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်က တိုးတက်မှုနှုန်းဖြစ်သည့် ၆ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းထက် တိုးမြှင့်ခန့်မှန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အကယ်၍ ကပ်ရောဂါဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၂ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ကျုံ့သွားနိုင်သည်။ ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်တော့ ပြန်လည် နလံထူလာနိုင်သော်လည်း ထိခိုက်ဖွယ်အလားအလာများလည်းရှိနေပါသည်” ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။
ရောဂါပိုး၏ စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ နယ်ပယ်များမှတစ်ဆင့် ပြန့်နှံ့ ထိခိုက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ကဏ္ဍတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ထိခိုက်မှုတော့ မတူပေ။ ခရီးသွားကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုကို ပိုမိုခံစားရပြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်၊နည်းပညာကဏ္ဍ တို့မှာ ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
နိုင်ငံ့စီးပွားရေး၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းမျှရှိသော စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပေါ်ပေါက်သည့် တိုးတက်မှုနှုန်း နှေးကွေးမှုမှာ အခြားကဏ္ဍများလောက် ဆိုးရွားခြင်းမရှိဘဲ ၀ဒသမ၇ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာနိုင်သည်။
ယေဘုယျခန့်မှန်းချက်အရဆိုလျှင် နိုင်ငံ့ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုသည် လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၇ ဒသမ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ သို့သော် COVID-19 ရိုက်ခတ်မှုမခံရလျှင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် တိုးတက်မှုနှုန်းအထိတော့ ရောက်အောင် အချိန်ယူရဦးမည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။
“အခုလတ်တလောမှာတော့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကာလလတ်မျှော်မှန်းချက်တွေက အကောင်းဘက်မှာရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကပ်ရောဂါက မမျှော်မှန်းနိုင်ပဲ ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်တွေရှိနေဆဲပါ။ ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ မူဝါဒရေးရာ ဆောင်ရွက်မှုတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ အလျှော့အတင်းလုပ်တာ၊ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေကို ပိုမိုထောက်ပံ့တာ၊ နွမ်းပါးတဲ့ မိသားစုတွေအနေနဲ့ CERP အစီအမံရဲ့ အကျိုးကို ခံစားခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဒီအစီအမံရဲ့ ထိရောက် အောင်မြင်မှုကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်”ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေညွှန်ကြားရေးမှူး Mariam Sherman က ပြောသည်။
စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း နှေးကွေးခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရရှိထားသော ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျှော့ချရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရရှိထားသော တိုးတက်မှုများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ဝင်ငွေများ လျော့ကျလာစေခြင်းက မူလကတည်းက ဆင်းရဲနေသော အိမ်ထောင်စုများကို ပိုမို ဆင်းရဲလာစေနိုင်သည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။
Previous articleUnregistered SIM Cards to be Terminated after June 30
Next articleLive Cattle Exports Estimated to Reach 1 Million This Year